I-10 yeekhosi eziBalaseleyo kwi-Intanethi kuLawulo lweProjekthi ngesicelo sasimahla se2020
I-10 yeekhosi eziBalaseleyo kwi-Intanethi kuLawulo lweProjekthi ngesicelo sasimahla
Kweli nqaku, sinike ezona khosi zibalaseleyo kwi-intanethi kulawulo lweprojekthi kwi-intanethi namhlanje ngesicelo sasimahla kwaye sabhalwa ngokubanzi ngokwaneleyo malunga nabo, bakunika amakhonkco ezicelo ngokuthe ngqo ukuba unomdla wokujoyina nayiphi na inkqubo.
Enkosi kwi-intanethi ungasenza isifundo ekhompyutheni kwaye ufumane isatifikethi sokwenyani kwaye ewe eso satifikethi siya kwamkelwa kangangoko kufunyenwe kwesona sikolo.
Imfundo ekwi-Intanethi incede abantu abaninzi ukuba bafezekise amaphupha abo ezifundo kwaye ngenxa yokuba ikwi-Intanethi kulula, akunasistres kwaye kulula.
Ngelixa sixhasa abafundi ukuba bamkelwe phesheya ukuze bafunde ngaphandle kweintanethi, sikwakhuthaza ukufundwa kwi-Intanethi kwaye sibhale amanqaku aliqela ngamathuba akwi-Intanethi apha.
Sinenqaku elihlaziyiweyo malunga Izifundo zasimahla kwi-Intanethi eCanada ezinezatifikethi sinenqaku malunga Iikholeji ze-Intanethi ezingabizi kakhulu ngaphandle kwemali yokufaka isicelo Apho unokufaka khona isicelo sokwamkelwa simahla kwi-Intanethi.
Emva kophando lwam, ndakwazi ukuza noluhlu lwezifundo ezikwi-Intanethi ulawulo lweprokjekthi kwaye njengesiqhelo, luluhlu oluhlaziyiweyo kunye neenkcukacha zekhosi nganye edwelisiweyo.
1 Malunga neKhosi yoLawulo lweProjekthi
2 Iikhosi ze-Intanethi kuLawulo lweProjekthi (ngesicelo sasimahla)
2.1 Imigaqo noKwenziwa koLawulo lweProjekthi
2.2 Isiseko soLawulo lweProjekthi
2.3 Ulawulo lweProjekthi ye-IT
2.4 Ukucwangcisela ukujonga nokuvavanya
2.5 Intshayelelo kuLawulo lweProjekthi yale mihla
2.6 Ulawulo lweProjekthi yeSkram
2.7 Imigaqo yoLawulo lweProjekthi ye-Agile
2.8 Uhlahlo lwabiwo-mali kunye neShedyuli yeProjekthi
3 Izibonelelo zeekhosi zoLawulo lweProjekthi
4 IiYunivesithi ezikwi-Intanethi Unokufunda iikhosi zoLawulo lweProjekthi
Malunga neKhosi yoLawulo lweProjekthi
Ulawulo lweprojekthi yindlela umntu acwangcise ngayo nolawulo lwezixhobo ezifanelekileyo zokwenza iprojekthi, abantu abanalo msebenzi baziwa njengabaphathi beprojekthi.
Abaphathi beeprojekthi benza konke okufunekayo ukugqibezela iprojekthi ngexesha elithile, yiprojekthi ke ngoko kufuneka ibe nesiqalo kunye nesiphelo kwaye iinjongo zeprojekthi kufuneka zifezekiswe.
Njengomphathi weprojekthi uphethe umsebenzi wokulawula iprojekthi kwaye kuya kufuneka wenze konke okufunekayo ukuze ugqibezele iprojekthi kunye nokufezekisa iinjongo kwaye unokuba ngumphathi weprojekthi ngokufunda eyunivesithi okanye kwi-intanethi, kunjalo, ungafumana isidanga njengomphathi weprojekthi kwi-intanethi.
Nangona kunjalo, kukho iikhosi kulawulo lweprojekthi kunye nesicelo sasimahla esinokufundwa kwi-Intanethi kwaye sesona sizathu siphambili sokubeka eli nqaku kwasekuqaleni.
Iikhosi ze-Intanethi kuLawulo lweProjekthi (ngesicelo sasimahla)
Imigaqo noKwenziwa koLawulo lweProjekthi
Isiseko soLawulo lweProjekthi
Ulawulo lweProjekthi ye-IT
Ukucwangcisela ukujonga nokuvavanya
Isiseko soCwangciso lweProjekthi kunye noLawulo
Intshayelelo kwiTheyori yoLawulo lweProjekthi kunye nokuSebenza
Ulawulo lweProjekthi yeSkram
Imigaqo yoLawulo lweProjekthi ye-Agile
Ukulawula iingozi zeProjekthi kunye noTshintsho
Uhlahlo lwabiwo-mali kunye neShedyuli yeProjekthi
Le yenye yezona zifundo zibalaseleyo kwi-Intanethi kulawulo lweprojekthi kwi-intanethi namhlanje kwaye ibonelelwa ngokusemthethweni yiDyunivesithi yaseCalifornia kwaye ithatha ixesha elimalunga neeveki ezisi-8 ukugqibezela nokufumana isatifikethi.
Ekupheleni kolu ngcelele, uya kuba nakho ukuchonga nokulawula ubungakanani bemveliso, wakhe ulwakhiwo lomsebenzi, wenze isicwangciso seprojekthi, wenze uhlahlo-lwabiwo mali lweprojekthi, ucacise kwaye wabele izixhobo, ulawule uphuhliso lweprojekthi, uchonge kwaye ulawule umngcipheko, kwaye uqonde inkqubo yokuthengwa kweprojekthi.
Kuyazenzekela kwaye kufuna nje iiyure ezi-6 zexesha lakho ngeveki. Isicelo simahla kodwa ukufumana isatifikethi kuyahlawulwa.
Le khosi yolawulo lweprojekthi ekwi-Intanethi ibonelelwa yiDyunivesithi yaseVirginia kwaye ihlala ixesha elimalunga ne-2 ukuya kwiiveki ze-4 ngesatifikethi esihlawulelweyo ekugqibeleni nangona isicelo sekhosi simahla.
Le yikhosi yokwazisa kwiingcinga eziphambili zokucwangcisa nokwenza iiprojekthi. Abafundi baya kuchonga izinto ezikhokelela kwimpumelelo yeprojekthi, kwaye bafunde ukucwangcisa, ukuhlalutya nokulawula iiprojekthi. Baza kuvezwa ngeendlela zakutshanje kwaye baqwalasele imiceli mngeni kwiindidi ezahlukeneyo zeeprojekthi.
Le yenye yeekhosi zolawulo lweprojekthi ezaziwayo kwiwebhu namhlanje. Ezi zifundo zinikezelwa ngokupheleleyo kwi-Intanethi ngu Isikolo saseIndiya seShishini kwaye ihlala ixesha leeveki ezine.
Zombini izicelo kunye nenkqubo ngokwayo isimahla kodwa ukufumana isatifikethi eyunivesithi emva kokuthatha ikhosi, kuya kufuneka uhlawule umrhumo othile.
Le khosi igubungela imiba eyahlukeneyo ephathelene (i) nokuqaliswa kweprojekthi, (ii) ukucwangciswa kweprojekthi kunye nokucwangciswa, (iii) ukubeka esweni nokulawulwa kweprojekthi, kunye (iv) nokupheliswa kweprojekthi.
Le yikhosi yasimahla yolawulo lweprojekthi kwi-Intanethi enikezelwa yiYunivesithi yasePhilanthropy kubo bonke abafundi bamanye amazwe nabasekhaya. Inkqubo ifuna malunga ne-1 ukuya kwi-2 yexesha lakho ngeveki kwaye ihlala iiveki nje ezimbalwa emva kokukhutshwa kwesatifikethi.
Kule khosi, uya kufunda ukuba ziphumelela njani iiplani zokuqokelela idatha, ulawulo, uhlalutyo kunye nokusetyenziswa.
Intshayelelo kuLawulo lweProjekthi yale mihla
Le yikhosi yasimahla yolawulo lweprojekthi kwi-Intanethi enikezelwa kwiqonga likaAlison. Le khosi yolawulo lweprojekthi isimahla, zombini isicelo kunye nesiqinisekiso konke kusimahla.
Iyazenzela kwaye ihlala ixesha leeyure ezili-15 emva koko abathathi-nxaxheba bavavanywa kwaye isatifikethi solawulo lweprojekthi simahla sinikwa bonke abathathi-nxaxheba abaphumeleleyo.
Le khosi inikezelwa kwi-intanethi simahla kwiqonga le-Udemy kodwa ukufumana isatifikethi kuya kufuneka uhlawule iindleko zenkqubo epheleleyo.
Ikhosi yenzelwe ukunceda nabani na onomdla wokwazi ngakumbi ngeSkram; funda malunga neekhonsepthi eziphambili kwiSkram kwaye ufumane ulwazi olusisiseko lwendlela isikhokelo seSkram esisebenza ngayo ekuhambiseni iiprojekthi eziyimpumelelo.
Nangona kufuneka uhlawule iindleko zenkqubo epheleleyo ukuba ufuna ukufumana isatifikethi, usenokuthatha ikhosi ngokupheleleyo simahla ukuba awukhathali malunga nesiqinisekiso.
Le yikhosi yasimahla ekwi-intanethi kulawulo lweprojekthi enikezelwa ngeqonga le-edX kwaye ivulelekile ukufumana abafundi abavela kwihlabathi liphela.
Izatifikethi ziyafumaneka ekupheleni kwekhosi zabathathi-nxaxheba abaphumeleleyo kodwa aba bathathi-nxaxheba kulindeleke ukuba bahlawule umrhumo wokukhutshwa kwesiqinisekiso.
Le khosi yolawulo lwe-Intanethi inikezelwa kwi-Intanethi kwiqonga le-edX yiBhanki yoPhuculo yaseMelika naphakathi kwabafundi abavela kumazwe aphesheya kwehlabathi.
Kuyazenzela kwaye kuhlala ixesha leeveki ezili-10 ngemali encinci yesatifikethi se- $ 25 yabathathi-nxaxheba abafuna ukufumana isatifikethi.
Le yenye yezona zifundo zidumileyo zolawulo lweprojekthi ezinikezelwa kwi-Intanethi ngesicelo sasimahla yiDyunivesithi yaseCalifornia, eIrvine.
Kuhamba ngokwakho ngovavanyo oluhleliweyo emgceni kunye novavanyo lokugqibela ngaphambi kokukhutshwa kwesatifikethi. Abathathi-nxaxheba kulindeleke ukuba badlule ngempumelelo ikhosi ukuze bakulungele ukukhutshwa kwesatifikethi.
Izibonelelo zeekhosi zoLawulo lweProjekthi
Ngokubanzi, ulawulo lweprojekthi yokufunda luya kuzilola izakhono zakho kwezi ndawo zilandelayo;
Ulawulo kunye nonxibelelwano lweqela olusebenzayo.
Ukucwangciswa kwenjongo yeqhinga lokusebenza
Amandla okuchonga imiqobo kunye nokulawula umngcipheko ngokufanelekileyo
Amandla okwenza olona hlobo lusebenzayo lwezixhobo, umsebenzi kunye namalungu eqela
Amandla okwenza ngokufanelekileyo imilinganiselo yokuvavanya inkqubela phambili yeprojekthi
Amandla okongamela iprojekthi ukusuka kwinqanaba lokuqala kude kube sekupheleni kungabandakanyi ukutshintsha kwezicwangciso zokulungisa naziphi na iingxaki ezinokuvela ngexesha lenkqubo.
Ukusekwa kwezikhokelo ezinokuthi zilandelwe lilungu leqela lakho.
Amathuba okufumana imisebenzi ehlawula kakuhle kwiinkampani eziphezulu
Ukukunceda ngokulinganayo ukuba uqhubeke, nolu uluhlu lweeyunivesithi ezikwi-Intanethi onokuthi uzifundele iikhosi zoLawulo lweProjekthi.
IiYunivesithi ezikwi-Intanethi Unokufunda iikhosi zoLawulo lweProjekthi
Apha ngezantsi kukho ezinye zeyona yunivesithi zibalaseleyo kwi-Intanethi ezibonelela ngedigri yolawulo lweprojekthi kunye nezifundo zesatifikethi.
IYunivesithi yaseCalifornia, i-Irvine
University International Florida
Kucetyiswa ukuba uqhubeke nophando kwisikolo ngasinye kwaye ukhethe esona silungele wena.
Unokuthatha isigqibo sokufunda ngaphezulu kwekhosi enye kwi-intanethi kulawulo lweprojekthi kuluhlu olungentla kwaye ufumane isatifikethi esingqina ukuba uyigqibe ngempumelelo le khosi.
Ezi zifundo ziyi-100% kwi-Intanethi, ziyaguquguquka- oko kuthetha ukuba ungazifunda ngokwakho kwaye bayakhawuleza ukugqiba.
Unokufumana iinketho ezahlukeneyo zesoftware yokuqalisa ukukunceda softwareprojects.com.
Unokufaka isicelo sokufundela ezi zifundo nokuba ufumane ukunyuselwa kwindawo osebenza kuyo okanye ukonyuka kwentlawulo okanye uqalise ikhondo elitsha lomsebenzi emva kokugqitywa.
Iikhosi zasimahla kwi-Intanethi zoLawulo oluPhezulu ezinezatifikethi
Izatifikethi zeshishini ekufuneka uqinisekise ukuba unayo
Izifundo zasimahla zeKhompyutha kwi-Intanethi phaya
Iikhosi zasimahla ezikwi-Intanethi eCanada ezineZatifikethi
Iiyunivesithi ezikwi-Intanethi zeziFundo zaSimahla kwi-Intanethi
I-10 yeekhosi eziBalaseleyo kwi-Intanethi kuLawulo lweProjekthi ngesicelo sasimahla se2020Izifundo zasimahla zolawulo lweprojekthiiikhosi ezikwi-Intanethi kulawulo lweprojekthiIikhosi zolawulo lweprojekthi kwi-Intanethi i2020Iikhosi zolawulo lweprojekthi kwi-intanethi
Post Previous:I-15 ephezulu ye-Scholarship engaziwayo eCanada
Okulandelayo Post:Iikhosi ze-15 zeYale zasimahla kwi-Intanethi zaBafundi kunye nabaSebenzi
Pingback: Iikhosi ezingama-300 + zasimahla ezikwi-Intanethi ezineZatifikethi eziPrintwayo 2021
Visit Website uthi:
Meyi 4, 2021 kwi-10: 53
Ukuba uhlangabezana nobunzima ngelixa usebenza kwiikhosi zakho zolawulo lweprojekthi, nceda undwendwele ababhali be-Edudorm ngoncedo lobungcali.